Echiche Mygha nke Onwe | Martech Zone
Otu n'ime slide m na-atụle n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkparịta ụka ọ bụla m nwere na azụmaahịa bụ nke m kpọrọ akụkọ ifo nke. Na sistemụ ọ bụla, anyị na-ahọrọ ụkpụrụ omume ọma na nke ezi uche. Ọ bụrụ na nke a, mgbe ahụ. Ọ bụ nsogbu, n'agbanyeghị, n'ihi na ọ bụghị otu ahụ ka esi eme mkpebi ịzụta. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na - azụ ahịa - ọ bụghị eziokwu nke njem ndị ahịa.
Indị ihe dị na ya bụ ịzụta m Amụma Amazon. Ahụrụ m egbe na ntanetị mgbe ọ malitere, mana enweghị m mkpa maka ya. N'oge ahụ, anaghị m abụ onye ọrụ kachasị. Mana ka m na-ebugharị ahịa ahịa anyị na Amazon, sonyeere Prime, ma nata mbupu n'ime otu ụbọchị, àgwà m banyere Amazon gbanwere.
Amabeghị m ọtụtụ ihe banyere ya Amụma Amazon, ọ bụ ezie. Otu ụbọchị na Facebook, Akara Schaefer kwuru okwu na-adọrọ mmasị. O kwuru na ya na-agwa Amazon Echo okwu ya karịa ka ọ dị onye nọ n'ime ụlọ. Dị ka ma teknụzụ teknụzụ na ịnụ ọkụ n'obi Amazon, enwere m mkpali.
Nyochawa ya, M ga-asị na ọ bụ n'ezie mbụ aka nke ndị ahịa m njem. M si Facebook gaa Amazon ebe m gụrụ peeji nke ngwaahịa. Ọ dị mma nke ukwuu mana enweghị m ike ịkọwa mmefu ahụ n'oge ahụ. M wee banye Youtube iji hụ ụdị ụdị ihe dị mma ndị na-eme na-abụghị ahịa.
M laghachiri Amazon na-agụ site na 1-kpakpando reviews na ahụghị n'ezie ihe ọ bụla nke ga-gbochie m ịzụta ngwaọrụ… n'èzí ma ọ bụ ọnụahịa ahụ. Enweghị m ike ịkọwa ihe egwuregwu ọhụrụ ahụ n'oge ahụ.
Maka izu na-esote ma ọ bụ karịa ka m na-agagharị na weebụ, ụfọdụ mgbasa ozi ahịa ọzọ maka Amụma Amazon gbapụtara. Emechara m daba na otu n'ime mgbasa ozi ma zụta ngwaọrụ ahụ. M ga-ede paragraf ole na ole gbasara m hụrụ ya n'anya, mana nke ahụ abụghị nzube nke post a.
Ebumnuche nke post a bụ iji kwurịta ebe a ga-esi ree ahịa a Amazon Echo. Ọ bụrụ na ọ bụ akpa aka, ọ ga-ekewet Mark dị ka influencer… ezie na ọ bụghị a influencer maka ngwaọrụ na nkà na ụzụ. Aga m ekwu na okwu Mark banyere Echo bụ ihe mmata karịa na njem ndị ahịa m. O nweghi ebe tupu ihe Mark kwuru bụ na amaara m ọkaibe na ụdị atụmatụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na ụdị njirimara bụ mmetụ ikpeazụ, ịkwụ ụgwọ mgbasa ozi na ịre ahịa ga-abụ isi mmalite nke ire ere ahụ. Ma ha abụghị n'ezie. Ọ bụrụ na ị juo m usoro atụmatụ ịzụ ahịa kwenyesiri m ike ịzaghachi nkuzi ahụ, M ga-aza:
Ọ bụghị nke ọ bụla otu atụmatụ nke mere m jiri zie Echo, ọ bụ ha niile. Ọ bụ nkwupụta nke Mark, ọ bụ nyocha m maka vidiyo ndị ọrụ na-emepụta, ọ bụ nyocha m nke nyocha ndị na-adịghị mma, ọ bụkwa mgbasa ozi na-echegharị. Kedu ka nke ahụ si daba na ntughari ntugharị Google? It doesn't… dị ka na-eme ọtụtụ ahịa njem.
Edere m banyere inbound ahịa isi mkpesa na agwa bụ isi ihe.
Enwere uzo ozo mana o di otutu. Amụma nchịkọta nwere ike na-edebe omume omume gafee usoro niile na azịza yana ka ị na-eme mgbanwe, ọ nwere ike ịmalite ịmekọrịta ọrụ dị mkpa na ahịa niile. Igwe ndị a nwere ike ịkọwa etu esi wedata ma ọ bụ bulie mmefu ego ma ọ bụ ọrụ na usoro azụmaahịa ụfọdụ ga-emetụta mkpokọta ala.
Ka ị na-achọ mgbalị ị na-eme n'ịzụ ahịa, ọ dị oke mkpa ka ị mata na ọbụlagodi azụmaahịa na-enweghị ntụgharị a na-ekwu na ọ nwere mmetụta zuru oke na usoro ịme mkpebi ndị ahịa. Mmetụta a agafeghị oke mbọ ịre ahịa anyị - ahụmịhe niile nke atụmanya na-atụnye ụtụ na njem ahụ.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe: I nwere ụlọ ahịa ma belata ndị ọrụ nhicha gị. Ọ bụghị na ụlọ ahịa gị ruru unyi, mana ọ nwere ike bụrụ na enweghị ntụpọ dị ka ọ dị na mbụ. Ihe si na ya pụta bụ na ahịa gị na-ada ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-adịghị eche na ọ dị ọcha dị ka ụlọ ahịa agbata obi ọzọ. Kedu ka ị ga-esi kọwaa nke a na mbọ azụmaahịa gị? Nwedịrị ike ịbawanye ahịa gị na-emefu n'oge a mana ahịa niile ajụ. E nwere ihe ọ bụla “super dị ọcha” akara ihe gị ahịa mmefu ego… ma ị maara na ọ nwere mmetụta.
Taa, ụlọ ọrụ chọrọ usoro ntọala nke ọdịnaya. Site na ebe nrụọrụ weebụ dị ọcha, na-anabata, na isiokwu ndị na-aga n'ihu na-ewulite ntụkwasị obi ha, iji okwu, akwụkwọ ọcha, na infographics. A na-ekekọrịta ha niile, yana uru agbakwunye site na ọwa mmekọrịta. A kachasị ha niile maka engines ọchụchọ. Ha niile na-atụnye ụtụ na akwụkwọ akụkọ email nke na-eme atụmanya.
Ọ dị oke egwu - ọ nweghị nke ị na-ere maka nke ọzọ. Nwere ike ịchọrọ ịhazi ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka ị na-ahụ mmetụta ha, mana ọ nweghị nke ị họọrọ na ntanetị ahịa zuru oke n'ịntanetị.
Tags: amazon echoAttributionakpa-aka àgwàinbound marketingnjirimara ikpeazụakụkọ ifoakụkọ ifo nkenchịkọta amụmaamụma njirimara
Ntughari: Otu Amazon Repricing si arụ ọrụ na ogologo oge ọ na-ewe